Halkey marayaan wadahadalada la sheegay iney u dhaxeeyaan Frank Lampard iyo maamulka Blues – miyuu kusoo laabanayaa Bridge? – Gool FM
Halkey marayaan wadahadalada la sheegay iney u dhaxeeyaan Frank Lampard iyo maamulka Blues – miyuu kusoo laabanayaa Bridge?
(London) 12 June 2019. Waxaa isi soo taraya warar xan oo sheegaya in halyeeygii hore Blues Frank Lampard uu dib ugu soo laabanayo Stamford Bridge si uu badal ugu noqdo tababaraha sii baxaya ee Maurizio Sarri, waana kan ay mar walba jecel yahiin iney dib u arkaan jamaahiirta.
Sida lagu qoray Mirror, Frank ayaa ku sugan magaalada London si uu wadahadalo ku aadan sidii uu tababare ugu noqon lahaa kooxdiisii hore kula jiro maamulka Blues, waxaana lasoo warinayaa inuu xiddigii hore xulka England yahay kan ugu cad-cad ee shaqada la wareegi kara.
Maurizio Sarri ayaa la rajeynayaa in loo magacaabo tababaraha Juventus isbuucaa, halka Blues ay dooneyso iney soo dhaweyso macalinkii 13-aad mudada uu talada kooxda hayo Roman Abramovich.
Lampard oo kooxdiisa Derby County keenay final-ka kulamada bug baxda ah ee loogu soo baxo horyaalka Premier League ayaa lagu arkay magaalada London isagoo la socda Didier Drogba oo ka tirsan safiirada kooxda Blues, waxeyna filashadu tahay inuu badali doono Sarri.
Maamulka Blues waxaa soo jiitay hanaanka uu Lampard u maamulay Derby iyo sida uu fursadda u siiyay da’yarta kooxda, waana waxa ay kooxda galbeedka London ka dhisan u baahan tahay maadaama laga ganaaxay suuqa labada waqti ee soo aadan.
Max Allegri ayaa sidoo kale ku jira liiska tababarayaasha Blues lala xiriirinayo, balse Rio Ferdinand wuxuu aaminsan yahay in saaxiibkiisii hore qaranka uu yahay dooqa ugu wanaagsan ee Blues.
“Waan la yaabi doonaa hadii ay meel kale u weecdaan” ayuu yiri Rio.